I-Kirobo Mini evela kwaToyota, umngani wakho olandelayo uzoba irobhothi elincane | Izindaba zamagajethi
IKirobo Mini yakwaToyota, umngani wakho olandelayo uzoba irobhothi elincane
URuben gallardo | | I-Robotics
Ukuba khona kwamarobhothi ezimpilweni zethu kuzoba ngokujwayelekile. Izinkampani ezahlukahlukene zibheja abangane basekhaya abakha indawo ethile yezimpilo zethu. Kepha, mhlawumbe, okunye okubaluleke kakhulu ukuzizwa uhambisana. IToyota ingenye yalezi zinkampani esebonile ukuthi abantu badinga ukuxhumana; ubambe ingxoxo nganoma yisiphi isikhathi. Futhi yilokho kanye irobhothi elilandelayo lomkhiqizo waseJapan elifuna ukukwenza: the Kirobo mini.
Le robhothi ebukeka kahle kakhulu ingahamba nawe noma kuphi lapho ufuna khona. Izilinganiso zayo ziyi Amasentimitha ayi-10 ubude futhi uthola isisindo esingaphansi kwama-gramu angama-200 (sengathi kusuka ku smartphone kuhilelekile). Ngakho-ke, ukuyiphatha ubhaka wakho, ephaketheni noma esikhwameni ngeke kube yinkinga.
IKirobo mini can ube nezingxoxo zemvelo nabantu. Ngaphezu kwalokho, uma ukhuluma naye uzokuphendula ikhanda akhulume nawe. Ngakolunye uhlangothi, irobhothi lakwaToyota liyakwazi ukubona imizwa futhi lizobhekana nawe ngokuhambisa ikhanda nezingalo. Futhi, le mini yaseKirobo ingathengwa ngesihlalo esingeziwe esizokuvumela ukuthi uyihlale noma kuphi: etafuleni lomsebenzi, emotweni, njll.
Njengoba sishilo, amarobhothi azokwanda kakhulu emakhaya ethu futhi kwaToyota bethula le modeli encane ukubheka ikusasa lapho lolu hlobo 'lobudlelwano' lungeke lube yinto engajwayelekile. Ngakolunye uhlangothi, lAbasebenzisi bale mini Kirobo bazoba nenethiwekhi yabo yokuxhumana lapho ungabelana khona nabanye abasebenzisi be-robot elihambisanayo nakho konke okubonayo nsuku zonke.
Ekugcineni, le mini yaseKirobo ibiza ngentengo engaphezudlwana kwama-euro angama-300 Futhi uzodinga ukulanda uhlelo lokusebenza lweselula ukuze konke kugeleze kahle. Khonamanjalo, isihlalo esengeziwe ebesikhuluma ngaso sizobiza cishe ama-euro angama-45. I-Kirobo mini okwamanje iyathengiswa eJapan futhi asazi ukuthi ihlose ukunweba ngaphandle kwezwe lakubo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » I-Robotics » IKirobo Mini yakwaToyota, umngani wakho olandelayo uzoba irobhothi elincane
Ithimba le-McLaren Formula 1 liqasha i-gamer njengomshayeli osemthethweni we-simulator
UXiaomi uzothengisa ama-smartphones angama-50 nge-1 euro ngesikhathi sangoLwesihlanu olumnyama lokuqala eSpain